Mogadishu Journal » 2021 » February » 16
Kooxaha ugu caansan Yurub ayaa heegan buuxa gali doona ka dib markii David Alaba uu xaqiijiyay inuu noqon doono xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay isagoo ah ciyaaryahan Bayern Munich ah. David Alaba ayaa xaqiijiyay inuu ka tagayo Bayern Munich marka qandaraaskiisa uu dhacayo...
Civilian contractor killed, nine wounded including Americans in major rocket strike on US-led coalition base in Erbil. 16 Feb 2021 A volley of rockets targeting an US airbase in Iraq’s Kurdistan region killed a foreign civilian contractor and wounded nine others including...
Riek Machar & danjiraha Somalia ee K/Sudan oo qodobo Muhiim ah ka wada hadlay (Sawirro)
Jubba:-Danjiraha Jamhuuriyadda Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfurta Sudan Xuseen Xaaji Axmed ayaa kulan kula qaatay magaalada Jubba Madaxwayne ku xigeenka kowaad ee dalkaas, Riek Machar. Kulankan ayaa looga hadlay xiriirka labada dal iyo labada shacab iyo siddii loo sii horumarin...
Dowlada oo Shaacisay in dalka la keenayo Talaalka Covid-19 kadib markii uu cudurkaasi sii faafay
Muqdisho:-Wasiirka caafimaadka dawladda FS marwo Fawsiyo Abiikar Nuur oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in kiisaska laga diiwaan galiyey dalka ee cudurka COVID-19 ay kordheen labadii bilood ee la soo dhaafay. Waxa ay sheegtay in baaritaanadii laga sameeyey dalka 1-da ilaa...
Miisaaniyada Ciidamada iyo sidii loo horumarin lahaa oo laga shiray (Daawo Sawirro)
Muqdisho:-Waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay Wasiirka Maaliyadda Xukuumada Soomaaliya, Wasiirka Gaashaandhiga iyo taliyaha ciidanka Xooga Soomaaliyeed iyo masuuliyiin kale. Kulankan ayaana looga hadlayay Miisaaniyadda ciidamada Milatariga Soomaaliya iyo sidii...